येशूले आश्‍चर्यकर्महरू गर्नुहुन्छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
यस अध्यायलाई पढिसकेपछि तिमीहरूलाई कस्तो अनुभव भयो? प्रभु येशूले गर्नुभएको यो आश्‍चर्यकर्मको महत्त्व पहिलेको भन्दा धेरै ठूलो छ, किनकि एउटा मरेको मानिसलाई चिहानबाट फर्काएर ल्याउनुभन्दा बढी विस्मयकारी कुनै आश्‍चर्यकर्म हुँदैन। त्यस युगमा, प्रभु येशूले त्यस्तो कुनै काम गर्नु अत्यन्तै अर्थपूर्ण थियो। परमेश्‍वर देह हुनुभएको कारणले, मानिसहरूले उहाँको शारीरिक रूप, उहाँको व्यवहारिक पक्ष, अनि उहाँको महत्त्वहीन पक्ष मात्र देख्न सक्थे। यदि कतिपय मानिसहरूले उहाँको चरित्रको केही कुरा वा उहाँमा भएको जस्तो देखिने केही विशेष क्षमताहरू देखे र बुझे भने पनि प्रभु येशू कहाँबाट आउनुभयो, उहाँको सारमा उहाँ साँच्चै को हुनुहुन्छ, उहाँ वास्तवमा अन्य कुन-कुन कुराहरू गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्‍ने बारेमा कसैलाई थाहा थिएन। यी सबै कुरा मानिसजातिको निम्ति अज्ञात थियो। धेरै मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा रहेका यी प्रश्‍नहरूको उत्तर दिन, अनि सत्यतालाई जान्नको लागि प्रमाण भेट्टाउन चाहन्थे। के परमेश्‍वरले आफ्‍नो पहिचानलाई प्रमाणित गर्न केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो? परमेश्‍वरको निम्ति, यो साह्रै सजिलो थियो—यो सजिलै हासिल गर्न सकिने कुरा थियो। आफ्नो पहिचान तथा सारलाई प्रमाणित गर्न उहाँले केही कुरा कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि समयमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर परमेश्‍वरको काम गर्ने आफ्नै तरिकाहरू थिए—योजनासहित, अनि चरणबद्ध रूपमा। उहाँले अन्धाधुन्ध कामहरू गर्नुभएन, बरु जुन कुरा उहाँले मानिसलाई देखाउनुहुन्थ्यो, अर्थले भरिएको हुन्थ्यो त्यस्तो कुनै कुरा गर्न उहाँले ठीक समय र ठीक अवसर खोज्नुहुन्थ्यो। यस प्रकारले, उहाँले आफ्नो अख्तियार तथा पहिचानलाई प्रमाणित गर्नुभयो। त्यसोभए, के लाजरसको पुनरुत्थानले प्रभु येशूको पहिचानलाई प्रमाणित गर्न सक्यो त? धर्मशास्त्रको निम्न अध्यायलाई हेरौं: “अनि जब उहाँले त्यसरी बोलिसक्‍नुभएपछि, उहाँले उच्‍च स्वरमा लाजरस, बाहिर आऊ भनी भन्‍नुभयो। तब तिनी, … मरेको मानिस बाहिर आए…।” जब प्रभु येशू ख्रीष्टले यसो गर्नुभयो, तब उहाँले केवल एउटा कुरा गर्नुभयो: “लाजरस, बाहिर आऊ।” तब लाजरस उसको चिहानबाट बाहिर आए—प्रभुले उच्चारण गर्नुभएका केवल केही वचनहरूको कारणले यो कार्य सम्पन्न भएको थियो। त्यस समयावधिमा, प्रभु येशूले वेदी खडा गर्नुभएन, अनि उहाँले कुनै अन्य कामहरू गर्नुभएन। उहाँले केवल एउटै कुरा गर्नुभयो। यसलाई आश्‍चर्यकर्म भन्न सकिन्छ कि आज्ञा? अथवा, के त्यो कुनै प्रकारको जादुगरी थियो? झट्ट हेर्दा, यसलाई आश्‍चर्यकर्म भन्न सकिन्छ कि भन्ने देखिन्छ, अनि यदि तैँले यसलाई आधुनिक दृष्टिकोणबाट हेर्छस् भने तैँले यसलाई आश्‍चर्यकर्म नै भन्न सक्छस्। तैपनि, यसलाई मृतकबाट प्राण फर्काउनको निम्ति बोलाइने एक प्रकारको जादु भनेर निश्चय नै भन्‍न सकिँदैन, र यो कुनै पनि प्रकारको जादूगरी अवश्य थिएन। यो आश्‍चर्यकर्म सृष्टिकर्ताको अख्तियारको सबैभन्दा सामान्य अनि सानो प्रदर्शन थियो भन्नु सही हुन्छ। यो परमेश्‍वरको अख्तियार र शक्ति हो। कुनै व्यक्तिलाई मर्न दिने, उसको आत्मालाई उसको शरीर छोडेर मृत लोक वा त्यो जहाँसुकै जानुपर्ने हो त्यहाँ जान दिने अधिकार परमेश्‍वरसित छ। व्यक्तिको मृत्यु हुने समय र मृत्युपछि तिनीहरू जानुपर्ने ठाउँ—यी कुराहरू परमेश्‍वरद्वारा निर्धारित हुन्छन्। उहाँले यी निर्णयहरू मानवहरू, घटनाहरू, वस्तुहरू, स्थान वा भूगोलको दबाबमा नपरी कुनै पनि समयमा र कुनै पनि ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँले यो गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले यो गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सबै कुराहरू र जीवित प्राणीहरू उहाँको शासनको अधीनमा छन् र सबै कुराहरू उहाँको वचन र उहाँको अधिकारद्वारा वृद्धि-विकास हुन्छन्, अस्तित्वमा रहन्छन् र नष्ट हुन्छन्। उहाँले मृतकलाई बौरी उठाउन सक्नुहुन्छ, अनि यो पनि उहाँले कुनै पनि समयमा, कुनै पनि स्थानमा गर्नसक्ने कुरा हो। यो केवल सृष्टिकर्तामा निहित रहेको अख्तियार हो।
जब प्रभु येशूले लाजरसलाई मरेको अवस्थाबाट फर्काइ ल्याउनुभयो, तब उहाँले यी वचनहरू मात्र प्रयोग गर्नुभयो: “लाजरस, बाहिर आऊ।” यसबाहेक उहाँले अरू केही भन्नुभएन। त्यसैले, यी वचनहरूले के कुरालाई प्रदर्शन गर्छ? यी वचनहरूले मरेको मानिसलाई पुनरुत्थान गर्ने लगायत परमेश्‍वरले बोलेर जे पनि सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई प्रदर्शन गर्छ। जब परमेश्‍वरले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो, जब उहाँले संसार सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले वचनहरूद्वारा सो गर्नुभयो—बोलिएका आज्ञाहरू, अख्तियारपूर्ण वचनहरू, अनि यस प्रकारले सबै कुराहरू सृष्टि गरिए, अनि यसरी, यो सम्पन्न भयो। प्रभु येशूद्वारा बोलिएका यी केही वचनहरू स्वर्ग, पृथ्वी र यावत् थोक सृष्टि गर्ने क्रममा परमेश्‍वरले बोल्‍नुभएका वचनहरू जस्तै थिए; यही प्रकारले, तिनमा परमेश्‍वरको अख्तियार र सृष्टिकर्ताको शक्ति थियो। परमेश्‍वरको मुखबाट निस्केका वचनहरूको कारणले सबै थोक बनिए र दृढ भइ खडा रहे, अनि त्यही प्रकारले, प्रभु येशूको मुखबाट निस्केका वचनहरूको कारणले लाजरस आफ्नो चिहानबाट बाहिर निस्क्यो। उहाँको देहधारी शरीरमा प्रदर्शन गरिएको र पूरा भएको परमेश्‍वरको अख्‍तियार यही थियो। यस्तो प्रकारको अख्तियार तथा क्षमता सृष्टिकर्ता अनि मानिसको पुत्रको स्वामित्वमा थियो, जसमा सृष्टिकर्ता प्रकट हुनुभएको थियो। लाजरसलाई मरेको अवस्थाबाट बिउँताएर परमेश्‍वरले मानवजातिलाई सिकाउनुभएको बुझाइ यही नै थियो। अब, हामी यस विषयको छलफललाई यहीँ सिध्याउनेछौं।
अघिल्लो: डाँडाको उपदेश, प्रभु येशूका दृष्टान्तहरू र आज्ञाहरू
अर्को: फरिसीहरूलाई येशूको हप्की
६. डाँडाको उपदेश आनन्द वाणीहरू (मत्ती ५:३-१२) नून र ज्योति (मत्ती ५:१३-१६) व्यवस्था (मत्ती ५:१७-२०) रिस (मत्ती ५:२१-२६) व्यभिचार (मत्ती...